Parami Institute Porch Sale Tickets, Sat, Dec 9, 2017 at 1:00 PM | Eventbrite
Parami Institute Porch Sale
by Parami Institute
Sat, Dec 9, 2017, 1:00 PM – Sun, Dec 10, 2017, 5:00 PM GMT+06:30 Unknown Region (Yangon) Time
Sun, Dec 10, 2017, 5:00 PM GMT+06:30 Unknown Region (Yangon) Time
3rd Floor of Shwe Gone Plaza, Intersection of Kabar Aye Pagoda Road and Shwe Gone Daing Road
Yangon, Bahan 11201
UPCOMING EVENT: PARAMI INSTITUTE PORCH SALE!
(Donate your unwanted goods to charity.)
တိုလီမိုလီ ပစ္စည်းများကို ဈေးပေါပေါ Secondhand ဈေးကွက်များမှ ရှာဝယ်ချင်ပါသလား?
နောက်လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် Parami Institute ​ရန်ပုံငွေရှာရန်အတွက် Parami Institute Porch Sale ပွဲ ပြုလုပ်သွားပါမည်။ အလှူခံ၍ရသော ပစ္စည်းများကို Parami Institute ၏ ဝရံတာတွင် ဈေးချိုချိုနှင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရရှိသောရန်ပုံငွေများကို Parami Institute ၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "အလွှာအသီးသီးမှ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာ​ရေး" မှာ အသုံးချမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းကို ဤ အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အိမ်မှာ အခု ဟောင်းနေပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲ ပစ္စည်းများ သောင်တင်နေသလား? အိမ်အပြောင်းအရွှေ့မှာ ကောင်းနေဆဲ ပစ္စည်းအပိုတွေကို ယူသွားရမလား၊ ထားခဲ့ရမလား ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါသလား။
ဒါဆိုရင် သင်တို့၏ ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှ စတင်လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ!
လှူဒါန်းနိုင်သော ပစ္စည်းများမှာ အခု ဟောင်းနေပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲဖြစ်ကြသော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ (laptops, desktops)၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များ၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ပရိဘောဂများနှင့် အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
ပစ္စည်းများလှူဒါန်းလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာများတွင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ကျူံဟွာရွှေဆိုင် (၂၁လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်)
၂။ CiCi ဖက်ရှင်ဆိုင် (အမှတ် - ၈၆(ဘီ)၊ ရှင်စောပုလမ်းနှင့် အနောက်မြေနီကုန်းလမ်းထောင့်၊ မြေနီကုန်း City Mart အနီး)
၃။ Parami Institute (ရွှေဂုံပလာဇာ တတိယထပ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံ)
မှတ်ချက် - ဆက်သွယ်နိုင်သော လိပ်စာများကို ထပ်မံတိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် - ၀၉-၇၉၈၆၂၇၇၁၀၊ ၀၉-၉၇၈၇၂၇၄၉၁၊ ၀၉-၇၉၃၀၃၀၅၅၅
Are you in need of or looking for good-quality second-hand products at the moment?
In December, we will hold the Parami Porch Sale to raise funds for Parami Institute which works to educate young leaders from all walks of life in Myanmar.
Please read below to know how you can donate to us.
Do you have any excess possession lying around your house? Are you moving out and feeling indecisive about what to do with your extra goods?
YOU CAN START DONATING FROM SEPTEMBER 4!
We accept any general household goods such as electronics (including desktops and laptops), kitchenware, books, games, sports gear, tools and clothes, as long as they are new or lightly used and in good working condition. We also accept larger items such as furniture and home appliances. In such cases, we would be much obliged if you could contact us along with photos of the items so that we can arrange to have the items picked up.
Donated items can be dropped off at our offices or any of the following locations:
1. Kyone Hwa Gold Shop (Corner of 21st and Mahabandula Street)
2. CiCi Fashion Shop (No. 86B, Corner of Shin Saw Pu and West Myay Ni Gone Roads)
3. Parami Institute (3rd Floor, Shwe Gone Plaza, Intersection of Kabar Aye Pagoda and Shwe Gone Daing Roads)
(Note: We will be adding more drop off points soon.)
Contact us @ 09 798 62 7710 | 09 978 72 7491 | 09 79 3030 555
We greatly appreciate any items you can help us with.
Things to do in Yangon Festival Charity & Causes
Browse Bahan Events